Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Ny trano fandraisam-bahiny Hawaii dia miatrika fatiantoka maherin'ny $ 1 tapitrisa
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany momba ny Hawaii • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Satria miatrika fatiantoka goavana ny trano fandraisam-bahiny Hawaii, ny solontenan'ny US Representatives sy Kahele dia mpanohana ny volavolan-dalàna hanomezana fanampiana ireo mpiasan'ny hotely marary.
Ny fidiram-bolan'ny hotely any Hawaii dia vinavinaina hidina 77 isan-jato amin'ny 2021 raha oharina amin'ny ambaratonga 2019.
Ny fitsangatsanganana orinasa, izay misy sokajy orinasa, vondrona, governemanta ary sokajy varotra hafa dia loharanom-bola lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny hotely.
Ny trano fandraisam-bahiny dia heverina fa hifarana amin'ny 2021 ka hihena ny asa efa ho 500,000 raha oharina amin'ny taona 2019, ao anatin'izany ny asa maherin'ny 12,500 XNUMX very any Hawaii.
Hotely Hawaii vinavinaina ho very $ 1.18 miliara amin'ny fidiram-bolan'ny orinasa amin'ny 2021, midina 77.4% raha oharina amin'ny ambaratonga 2019, araka ny tatitra vao haingana iray avy amin'ny Fikambanan'ny hotely sy hotely amerikanina (AHLA).
Ny trano fandraisam-bahiny manerana ny firenena dia vinavinaina hamarana 2021 mihoatra ny $ 59 miliara amin'ny fidiram-bolan'ny orin'asa raha oharina amin'ny 2019 rehefa very efa ho 49 miliara dolara tamin'ny 2020.
Ny fanadihadiana vaovao dia avy amin'ny fanadihadiana nataon'ny AHLA farany teo, izay nahitana fa ny ankamaroan'ny mpandeha raharaham-barotra dia manafoana, mampihena ary mampihemotra ny dia ao anatin'ny olana COVID-19 mitohy.
Mba hanitarana ny lalan-dàlana ho an'ny mpiasa hotely ary hanome ny fanampiana ilaina hahatafita velona mandra-piverin'ny dia amin'ny ambaratonga mialoha ny areti-mifindra, ny solontena amerikana Ed Case (HI-01) sy Kaiali'i Kahele (HI-02) dia nanao sonia ho mpanohana ny ny lalàna momba ny Save Hotel Jobs, lalàna alohan'ny Kongresy izay mitarika 100% ny famatsiam-bola hitazonana ny mpiasan'ny hotely handray karama.
Ny fitsangatsanganana an-tsokosoko, izay misy sokajy orinasa, vondrona, governemanta ary sokajy varotra hafa dia loharanom-bola lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny hotely ary tsy antenaina hahatratra ny ambaratonga mialoha ny pandemia mandra-pahatongan'ny 2024. Ny tsy fisian'ny dia sy raharaham-barotra ary hetsika dia misy akony lehibe amin'ny asa, ary manasongadina ny filàna fanampiana vonjimaika federaly, toy ny Save Hotel Jobs Act.
Ny trano fandraisam-bahiny dia antenaina hifarana 2021 amin'ny asa efa ho 500,000 raha oharina amin'ny taona 2019, anisan'izany ireo asa very maherin'ny 12,500 XNUMX ao Hawaii. Ho an'ny olona 10 miasa mivantana amin'ny trano fandraisam-bahiny dia manohana asa 26 fanampiny ao amin'ny fiarahamonina ny trano fandraisam-bahiny, manomboka amin'ny trano fisakafoanana sy fivarotana hatramin'ny orinasa mpamatsy trano fandraisam-bahiny — midika asa fanampiny 1.3 tapitrisa fanampiny no atahorana ho an'ny firenena raha tsy mihetsika ny Kaongresy.